Miarahaba ny sidina fanokanana voalohany nataon'i Montréal i Martinique
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miarahaba ny sidina fanokanana voalohany nataon'i Montréal i Martinique
Amin'ity ririnina ity, ireo mpandeha miainga avy any Montréal, Kanada dia hanana safidy betsaka kokoa noho ny hatramin'izay hahitana an'i Martinique. Manomboka amin'ny 1 Novambra 2018, ny Norwegian Air dia hanokatra sidina tsy miato amin'ny talata, alakamisy ary asabotsy amin'ny 2.25 hariva manomboka amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Montreal Pierre-Elliot-Trudeau mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Martinique Aimé Césaire. Ny tahan'ny fampidirana dia manomboka amin'ny $ 219 CAD - ao koa ny haba. Ny norvezianina dia notondroina ho «zotram-piaramanidina lafo vidy indrindra any Eropa» ary «sanda tsara indrindra amin'ny vola amin'ny taona 2018."
“Tena faly izahay manampy lalana vaovao eo anelanelan'ny Montréal sy Martinique, rehefa manohy mampitombo ny tambajotranay Karaiba frantsay. Montréal koa no toerana voalohany nalehanay kanadianina, ary nisy dikany tanteraka ho antsika ny manomboka miditra an'io tsena vaovao io amin'ny alàlan'ny fampifandraisana an'i Martinique sy Montréal ary nanampy io vavahady amerikana avaratra manan-danja io amin'ny làlantsika efa malaza sy mahomby avy any New York sy Fort Lauderdale. Amin'ity herinandro ity dia mandefa sidina mivantana eo anelanelan'ny Fort de France sy Cayenne any Guyana frantsay koa izahay, manamafy ny fanoloran-tenanay ho an'i Martinique. Manantena vanim-potoana hafa hahomby isika, izay tsy ho tanteraka raha tsy teo ny fanohanan'ny Fahefana Mpizahatany Martinique ”hoy i Anders Lindström, Talen'ny Serasera Norwegian Air, Amerika Avaratra.
«Ny Birao mpitantana, hotely, mpikirakira fizahan-tany ary mpiara-miombon'antoka orinasa eto amin'ny Martinique Tourism Authority dia faly amin'ny fifandraisana vaovao nomen'ny Norveziana Air manelanelana Montreal sy Fort-de-France. Ity serivisy ity izay misokatra miaraka amin'ny fifandraisana amin'i Guyana frantsay dia fotoana tsy manam-paharoa hampiroborobo ny dia ho an'ny Kanadiana any amin'ny nosintsika ary koa any Cayenne. Te hanampy aho fa miaraka amin'ny fitomboana 49% efa voarakitra mialoha amin'ny famandrihana mialoha ho an'ny vanim-potoana ho avy, ny tsena kanadiana dia laharam-pahamehana. Misaotra ary arahabaina norvezianina. Tia anao i Martinique! ” hoy i Karine Mousseau, kaomiseran'ny fizahantany martinique.
Hongria, Latvia ary Gresy dia manandrana ny mpitsikilo lainga AI handefasana mpitsidika
Zon'olombelona sy fizahantany: lahatsoratra iray misaintsaina